Reer galbeedka oo shaki ka muujiyay sharaxaada dowlada Sacuudiga ee geerida Jamaal – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaReer galbeedka oo shaki ka muujiyay sharaxaada dowlada Sacuudiga ee geerida Jamaal
Hiiraan Xog, Hay’adaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo dowladaha midowga Yurub ayaa shaki ka muujiyay bayaankii ka soo baxay Sacuudiga ee ku saabsanaa geerida Jamal Khashoggi.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Jean-Yves Le Drian, ayaa dalbadan in al sameeyo baaritaan buuxa.
Balse qaar ka mid ah dowladaha Carabta ee saaxibada dhaw la ah boqortooyada Sacuudiga ayaa war ays oo saareen waxa ay taageero ugu muujiyeen dowladda Sacuudiga.
Dhanka kale saraakiisha Turkiga ayaa waxay wacad ku mareen in ay soo bandhigi doonaan faafaahinta ku saabsan dilka weriye Jamal Khashoggi, kadib markii Sacuudiga uu markii ugu horeeysay aqbaly in Jamal lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacudiga uu ku leeyhay magaalada Istanbul.
Saraakisha Turkiga ayaa markii hore sheegay in si ulakac ah gudaha qunsuliyadda loogu dilay kadibna meydkiisa la jarjaray.
Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya oo baaq u diray madaxda sare ee dalka